बलात्कारका घटना मिलाउनेलाई तीन वर्ष कैद
काठमाडौं। बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्न सरकारले कानुनी बाटो खोलेको छ। यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो मिलापत्र गराएमा थप ६ महिना कैद सजाय हुने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाङफेले बताइन्। मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी अपराध कार्यविधि र ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा रहेका बलात्कार सम्बन्धीको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो।
अध्यादेशमा १० वर्ष मुनि र ७० वर्षमाथिका व्यक्तिलाई बलात्कार भएमा जन्मकैद हुने व्यवस्थालाई यथावत नै राखिएको छ । यसअघि कसुरदार ज्येष्ठ नागरिक भएमा कैद मिनाहा गर्ने कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर अबदेखि बलात्कार मुद्दामा कैद मिनाहा नहुने व्यवस्था राखिएको मन्त्री तुम्बाहाङफेले जानकारी दिइन् ।
यसअघि १४ देखि १६ वर्षसम्मको बालिका बलात्कार गर्नेलाई १२ देखि १४ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था रहकोमा अध्यादेशमा उमेर परिवर्तन गरेर १२ देखि १६ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था छ। १६ देखि १६ वर्षको व्यक्तिलाई बलात्कार गरेमा १० देखि १२ वर्ष कैदको व्यवस्था परिवर्तन गरेर १० देखि १४ वर्ष कैद सजाय गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
१८ वर्षभन्दा माथिकालाई बलात्कार गरेमा ७ देखि १० वर्ष कैदको व्यवस्था परिवर्तन गरेर अध्यादेशमा १० देखि १२ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बलात्कारसम्बन्धी कानुनलाई कडाइ गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेको थियो। उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाइएको छ। कानुन मन्त्रालयले अध्यादेश तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो।
सशस्त्र प्रहरीका ८ डीआईजीको सरुवा, को–कहाँ ? (सूचीसहित)
भारतीय विदेश सचिव नेपालमा रहँदा के कुरा भए ? (१९ बुँदामा)
ओली बुढो बाघ हुन्, कसैको दाल गल्दैनः मन्त्री श्रेष्ठ
ओली कमरेड ! अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री त्याग्नुस्
आठ हाेइन, १५ मन्त्रालय दिए पनि कांग्रेस सरकारमा जाँदैन
वडा सचिवलाई कोरोना देखिएपछि नगरका सेवा बन्द
कोरोना संक्रमणबाट दाजुभाइको निधन
आफ्नै छोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा बाबु पक्राउ
संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन आवश्यक छ : सभामुख सापकोटा
एनआईसी बैंकद्वारा ‘फोटो पात्रो २०७८’ नामक फोटो प्रतियोगिता सार्वजनिक
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यसमिति विघटनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता
‘विश्वको नेतृत्व गर्न अमेरिका फर्केर आयो’